तपाईको ओठ कालो छ ? यसो गर्नुहोस् – Deshko News
Home » स्वास्थ्य » तपाईको ओठ कालो छ ? यसो गर्नुहोस्
कतिपय मानिसको ओठ कालो हुनेगर्छ । जसले गर्दा अनुहारको सुन्दरता नै लुकेको हुन्छ । विशेष गरेर महिलाहरु ओठ नरम र कालोपन हटाउन विभिन्न किसिमका कस्मेटिक सामग्रीहरु प्रयोग गर्ने गर्छन् ।
जसले गर्दा उल्टै ओठ विस्तारै कालो हुँदै जान्छ । यसकारण ओठलाई प्राकृतिक रुपबाटै कालोपन हटाउन विभिन्न सिकिमका उपायहरु अपनाउन सकिन्छ ।
दूधको तरः ओठको सुख्खापन हटाउँन थोरै तरमा एक चिम्टी बेसार मिसाएर नियमित रुपमा बिस्तारै मालिस गरेमा केही दिनमै ओठ मुलायम र गुलाबी भएको पाउनुहुनेछ।
कोको बटर: ओठको कालोपन हटाउन कोको बटरको प्रयोग गर्न सकिन्छ । दुई टेबलचम्चा कोको बटर, आधा चिया चम्चा मधु वाक्स लिनुहोस्। उमालेको पानी एउटा भाडामा वाक्स हालेर पगाल्नुहोस्। यसमा कोको बटर हाल्नुहोस्। यो मिश्रणलाइ चिसो भएपछि ब्रसको मद्दतले ओठमा लगाएमा यसले ओठ नरम हुनेछ र कालोपन पनि हट्नेछ।
गुलाबको पत्ताः ओठको कालोपन हटाउँन गुलाबको फूलको पत्ताको नियमित प्रयोग गर्नाले ओठ साँच्चिकै गुलाबी र चम्किलो हुनेछ। यसका लागि गुलाबको पत्तालाई पिसेर त्यसमा थोरै ग्लिसिरिन मिसाउनुहोस् र त्यसको घोल नियमित रुपमा राती सुत्ने समयमा ओठमा लगाउनुहोस् र बिहान धुनुहोस्।
कागतीः कागतीले पनि ओठको कालोपन हटाउँछ। यसका लागि निचोरेको कागती बिहान बेलुका आफ्नो ओठमा बिस्तारै रगडेर लगाए फाइदा पुग्छ ।
जैतूनको तेलः यदि ओठ पूरै फुटेको छ र कालोपन पनि आएको छ भने जैतूनको तेल अर्थात् ओलिभ आयलमा भ्यासलिन मिसाएर दिनमा ती चारपटक लगाउनुहोस्, ओठ चिरिएको निको हुनेछ भने ओठ हल्का गुलाबी पनि हुनेछ।
महः महको प्रयोगले केही दिनमै ओठ चमकदार र मुलायम हुन्छ।यसका लागि थोरै महलाई आफ्नो औंलामा लिएर बिस्तारै ओठमा लगाउनुहोस् वा महमा थोरै स्वाग मिसाएर ओठमा लगाउनुहोस्। दिनमा दुइपटक यो उपाय अपनाउनाले केही दिनमै असर देखिनेछ।
अण्डाः अण्डा स्वास्थ्यका लागि मात्र होइन, सौन्दर्य बढाउन पनि उपयोगी मानिन्छ। यसको लेप लगाउनाले पनि ओठको चमक बढ्छ।
कर्मचारी सरुवा गरिएपनि जान अटेर